Yakabudirira B2B Yemukati Yekushambadzira Strati Inoda Chiremera | Martech Zone
Yakabudirira B2B Yemukati Yekushambadzira Strati inoda Chiremera
NeChishanu, Gumiguru 9, 2015 NeChishanu, Gumiguru 9, 2015 Douglas Karr
Vatengesi vanowanzo kunetseka kungoenderana nezvinodiwa zvemukati mavo uye neemaimeri ekushambadzira zvirongwa. Kazhinji kazhinji kwete, matekiniki evatengi vedu anovakwa kutenderedza maitiro avo emukati. Nhau, kuburitswa kwechigadzirwa, kugadziridzwa kwebasa kana kunyangwe marongero evhiki chete anoraira izvo zvakaburitswa.
Dambudziko, chokwadika, nderekuti rako bhizinesi 'kushambadzira chirongwa hachiteedzere maitiro eako tarisiro' rwendo. Bhizimusi ramangwana rinogona kunge richitsvaga ruzivo iwe rwaunogona kupa zuva rega rega regore, kana pamwe nemwaka, kana nebhajeti kutenderera. Nguva ndeimwe yevimbiso dzekutungamira kusimudzira uye kushambadzira otomatiki masystem - kupa zvemukati zvinokwevera kana kusundira iro bhizinesi kuenda kutendeuka kubva zvavo purogiramu.
Asi otomatiki haisati isina mhosho. Makambani mazhinji anoongorora uye akaunganidzira data revatengi kuti vauye neyakagadziriswa lifecycle. Ichokwadi, chokwadika, ndechekuti bhizinesi rega rega rinoshanda pane yavo purogiramu - Pushira zvakanyanya uye nekukurumidza uye warasikirwa netarisiro. Dhonza zvishoma nezvishoma uye mukwikwidzi wako anogona kuwana kutengesa.
Pane zviyero zvakawandisa mukusimudzira zvemukati. Kazhinji kazhinji kwete, mabhizinesi anoshanda mukugadzira. Muenzaniso unogona kunge uri wekuburitsa zuva rega rega blog, tsamba revhiki nevhiki, yemwedzi infographic uye nekota whitepaper. Asi kugadzirwa hakuwane bhizinesi kwarinoda kuve riripo. Kuvapo kuri kuve nezvakakodzera zvemukati munzvimbo chaipo kana tarisiro iri kuitsvaga.
Nekudaro, mabhizinesi anovandudza akasimba zvemukati makarenda, zvemukati maitiro, uye ekukurudzira mashedheni uye neruzhinji hukama mishandirapamwe yekuona kubudirira. Nyowani nyowani michina iri kushandisa muchina kudzidza tekinoroji kukwidzirisa kutaurirana netarisiro uye kufamba navo kuburikidza kutendeuka padanho rinoenderana nemutengi.
Izvo hazvisati zvakakwana.
Dambudziko, chokwadika, nderekuti chero mukwikwidzi anokwanisa ari kushanda iyo yakafanana angle uye pamwe achitomisikidza matekinoroji akafanana. Izvo hazvina kukwana chete kuenderera kuburitsa zvemukati mune isingaperi, inodzokororwa kutenderera. Kufambisa kutungamira kwebhizinesi kubva kune yekutengesa tarisiro kuenda kune anokwanisa kutungamira kunoda chiremera. Uye kufambisa anokwanisa kutungamira kukutengesa kunoda kuvimba.
Kana mabhizinesi ari kutsvaga mhinduro, vanoitsvaga kubva kune simba. Mabhizinesi anoda kudzikisira njodzi, saka ivo vanowanzo tenga kubva kune vatengesi uye mhinduro nemasimba emabhizimusi.
Chiremera chinowanzo kufuratirwa kunyangwe ichive kiyi yekubudirira kwemaitiro ekushambadzira zvemukati. Tweet Izvi!
Mamwe makambani anotsvaga rubatsiro rwevanokurudzira avo vanotova nechiremera muindasitiri yakapihwa kuti vafambise yavo. Isu takaona mhedzisiro yakavhenganiswa neiyi zano kubvira simba zvinowanzoitika chaizvo mukurumbira paIndaneti.
Nzira inoshanda kwazvo yekuwana masimba haisi kuibhadhara; ndeyekuvaka yako. Tweet Izvi!
Chiremera chekuvaka nezviri mukati hachisi chekugadzira zvinyorwa zvitsva. Izvo ndezvekuongorora zvese zvidimbu zvemukati zvaunazvo uye nekuzvigadzirisa. Izvo ndezvekubvisa zvekunze zvemukati izvo zvisiri kutyaira chero inotungamira kana inofambisa tarisiro pasi peiyo lifecycle.
Seyeji yechiremera, hapana hurongwa huri nani kupfuura Google. Maalgorithms eGoogle akachinja mumakore achangopfuura kuti atarise kukosha uye hukama pakati pevanhu, mabhizinesi, nzvimbo, mazita echigadzirwa, uye kunyangwe vanhu vari mumasangano. Kana iwe uchinetseka kuti kambani yako inesimba here kana kuti kwete, unofanirwa kunge uchitsvaga paunotarisa misoro ine chekuita netarisiro dziri kutsvaga online.
Kuti uwane chinzvimbo chakanaka mumhedzisiro yeinjini yekutsvaga, unofanirwa kugadzira zvemukati zvisingaite Kune rakapihwa kiyi musanganiswa, izvo zvinoda kuti iwe udzidze izvo zviri kukunda mukutsvaga uye uite rakanyanya basa rakazara. Isu tinoona misoro iyo vakwikwidzi vari pachinzvimbo chiri nani pane zvatiri, isu tinogadzira zvirinani zvirimo kuburikidza nekushandisa zvinyorwa, magirafu, uye vhidhiyo… uye isu tinogadziridza zvemukati izvo isu tatova nazvo izvo zvisina kumira mushe.
Kuyedza kwedu kwachinja kubva ku100% nyowani yezvigadzirwa zvemukati izvozvi kuenda kuanenge 50% nyowani uye 50% optimization yezvazvino zvemukati. Maitiro edu ezvemukati akatama kubva kure kugara achigadzira zvinyorwa zvitsva, infographics, uye vhidhiyo. Isu tava kugadzirisa zvirimo zvirimo, kuzvinyorazve sezvitsva (paiyo chete URL) uye nekuzvikurudzira munharaunda. Isu zvakare tinobatanidza yakabhadharwa mazano ekuwedzera kusvika kwayo.
Nekuti ndiyo yakanakisisa zvemukati, zvichave nani. Mhedzisiro yacho inoshamisa. Pakati pemazana ezita remusoro wenyaya watakashanda pariri, isu takatama kubva paavhareji chinzvimbo chegumi neshanu kusvika paavhareji chinzvimbo che 11. Shanduko dzedu dzakakwira kupfuura 3% yekutungamira kwekutora. Uye mutengo wedu mutobvu uri kudonha nepo hutungamiriri hwedu huri kuwedzera.
Tsamba yekupedzisira pane izvi. Chiremera chinouya kune vanhu zviri nyore kupfuura zvinhu zvebhizinesi, saka unofanirwa kuisa vatungamiriri vako kunze uko. Apple chiratidzo hombe, asi simba rebhizinesi harina mazita saSteve Jobs, Jonathon Ives, Tim Cook, Steve Wozniak, Guy Kawasaki, nezvimwe.
Ipa vanhu vako nemukana wekuve vane masimba manhamba uye iwe unogona kukwidziridza rako bhizinesi 'chiremera. Kuona vatungamiriri vako vachitaura pazviitiko nemisangano kunoisa bhizinesi rako pamberi pevateereri rinoenderana uye rakakodzera nguva. Mukati-mehukama hukama hunoderedza iyo nguva inodiwa yekuvhara kutengesa sezvo uchikwanisa kuratidza masimba ako uye panguva imwechete kuwana kuvimba kwetariro.
Tags: simbab2bb2b chiremerab2b shandukozvemukati mvumoGuy KawasakiJonathon Ivesmabasa steveSteve WozniakTim Cook
Mobile Mapurogiramu: Zvakakosha Sei Kuronga, Prototyping, uye Kuyedza?
Maitiro Ekushambadzira Yako Nhare Yekushandisa